Ikamelo Lesiginci - I-Airbnb
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Guillermo
Leli ikamelo elihle endlini enamakamelo okulala amane e-Mission District.
Inombhede ontofontofo kakhulu ogcwele ongamukela abantu abadala ababili nombhede olala umuntu oyedwa ngokuqagela okwengeziwe
Amafasitela amakhulu abhekene ne-patio engemuva, uxhumano lwe-inthanethi olusheshayo
Le ndawo ingaba yinhle kubangane noma abantu abashadile abahamba ngesabelomali esiphansi.
Sicela usazise NGAPHAMBI kokubhukha ingqikithi yenani lakho lezivakashi, futhi uma uza nezilwane ezifuywayo noma izingane.
Le ndlu ihlala eduze kwendlu emi endala kakhulu e-San Francisco (esanda kulungiswa kabusha), indlu yethu icishe ilingane ngeminyaka, inobuhle bayo kanye nomklamo oyinqaba wezakhiwo. Ingase ingabi yinhle kodwa inezinhlamvu eziningi kanye nokukhangayo.
Siyakwazi ukufinyelela ophahleni oluhle lapho ungakhululeka khona futhi ujabulele ukubukwa okuhle kwe-Potrero Hills kanye ne-Twin Peaks.
Sicela uqaphele kakhulu ngenkathi ufinyelela ophahleni lwendlu, azikho izingane, ukudla noma iziphuzo ezivunyelwe lapho.
4.61 · 90 okushiwo abanye
Indlu itholakala endaweni eyodwa ukusuka kubo bonke ubumnandi be-24th st. Kunezindawo eziningi zokudlela, amabha, amagalari, izimakethe nobuciko basemgwaqweni.
I-Mission ingenye yezifunda ezinikeza ubumnandi obuningi eSan Francisco, kunezindawo eziningi zokudlela, amagalari, izitolo zekhofi, amabha kanye namakilabhu ongawavakashela.
Amapaki amaningi futhi: Ipaki yasePotrero Del Sol, iGarfield Square kanye nePrecita Park akuhambo olufushane nje.
Ayikho indawo yokupaka yangasese kuleli bhilidi, indawo yokupaka emgwaqweni kuphela.
I-San Francisco inenani eliphakeme kakhulu lezindlu ezithengiswayo ezweni (noma emhlabeni) okwenza izindawo zokupaka ezizimele zibe ukunethezeka okungajatshulelwanga bahlali abaningi.
Uma uletha imoto edolobheni (akunconyiwe ngaphandle uma uhamba ngomgwaqo ngaphandle) sicela uhlele kusengaphambili futhi uqaphele ukuthi ithrafikhi, izikhombisi-ndlela zokushayela kanye nokupaka edolobheni kungase kube inkinga, ikakhulukazi uma ungajwayelene nethrafikhi yendawo. kanye nemithetho yokupaka.
Imoto yakho ingase ipakwe mahhala emigwaqweni eminingi ezungeze indlu kodwa naka imikhawulo yokupaka ethunyelwe, imikhawulo yesikhathi, izinsuku zokuhlanza, izindawo ezibomvu noma eziphuzi, imigwaqo yomgwaqo njll. Le mithetho iyasetshenziswa futhi izinhlawulo zibiza kakhulu.
Igalaji langasese eliseduze kakhulu yi-SF General Hospital (cishe amabhulokhi angu-2) Ngomhla zinga-24 phakathi kwe-Utah ne-San Bruno imali yokugibela ibiza u-$15/ubusuku.
Uzobe uhlanganyela indlu nami kanye nabanye abahambi,
(Sivunyelwe ukuba nabantu abaningi abasi-6 ngaleso sikhathi endaweni.)
Nginekamelo lami langasese futhi ngihlala ngimatasa phakathi nosuku kodwa ngamukelekile ukukusiza ngezikhombisi-ndlela noma izincomo ngesikhathi sokuhlala kwakho edolobheni
Futhi nginenja engu-10lb ebizwa ngokuthi u-Mico epholile futhi ethulile. Izilwane ezifuywayo azilokothi ziphume ekamelweni lami.
Ngingumuntu othanda ukuhlalisana nabantu futhi ngiyahlonipha, ngingathola ithuba lokuxoxa ngesikhathi sesidlo sakusihlwa kodwa ngizokunaka ubumfihlo bakho.
Nginekamelo lami langasese futhi…
Inombolo yepholisi: City registration pending